Mayelana NATHI - K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek Machining Co., Ltd. yasungulwa ngo-2010, etholakala "World Factory" -Dongguan, China, esehlanganise indawo engaphezu kuka-20,000 metres square, ezikhethekile ngokunemba imishini izingxenye ukucutshungulwa futhi isidlulile ISO9001: 2015 isitifiketi.
Singakwazi ukwenza ngokwezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokwezidingo zamakhasimende, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha. Ukuze kuqinisekiswe izidingo zekhwalithi yamakhasimende ethu, singenise imishini yokucubungula ethuthukile nemishini yokuhlola efana ne-Five-axis Machine (DMG), i-CNC, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Grinder yangaphakathi / yangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, I-Height Gauge ne-Material Analyser njll kusuka e-Germany, Japan, Switzerland nase-United States. Le nkampani inezinto ezanele zokucubungula imishini kanye nesistimu yokuphathwa kwekhwalithi eqinile, ikhwalithi yezingxenye ezinemba ingahlangabezana namazinga embonini yomhlaba kanye nemikhiqizo ethengiswa phesheya kwezilwandle.
Izinto zethu ezijwayelekile ziyinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, amaplastiki wobunjiniyela nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy. Singabuye sinikeze ukwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende: ukupholisha, ukufaka i-anodizing, ukufaka i-galvanizing, i-nickel plating, i-silver plating, i-passivation ne-powder spraying, njll.
Ngemuva kweminyaka eyishumi yentuthuko, i-K-Tek ayinenani elikhulu kuphela labasebenzi abaqeqeshiwe nabezobuchwepheshe neqembu elihle kakhulu labaphathi, kepha futhi uneqembu lokuthengisa elihle kakhulu. Ukuze sivumele amakhasimende amaningi asazi, sihamba njalo emhlabeni ukuhlanganyela emibonisweni, njenge-United States, United Kingdom, Germany, Japan njalonjalo. Sazi inani elikhulu lamakhasimende avela embukisweni, ngasikhathi sinye, amakhasimende amaningi aphesheya eza ezovakashela ifektri yaseK-Tek futhi axoxa ngezindaba zokubambisana.Ukwesekwa kwakho kuyisikhuthazo esikhulu kithi. Siphinde sethemba ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zemishini kumakhasimende amaningi adinga usizo. Sikumema ngobuqotho ukuthi ubambisane futhi uthuthuke ndawonye.